ငါဘယ်စက်ဘီးဆက်စပ်ပစ္စည်းလိုအပ်ပါသလဲ? - စက်ဘီးစီး
အဓိက > စက်ဘီးစီး > စက်ဘီးဆက်စပ်ပစ္စည်း - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
စက်ဘီးဆက်စပ်ပစ္စည်း - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
၁။ သံခမောက်လုံး -စက်ဘီးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ Theဆိုင်ကယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနောက်ဆက်တွဲအားလုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ဒီနေ့ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်တိုင်းရှိသင့်တယ်လို့ထင်တဲ့အချက်လေးချက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပထမ ဦး ဆုံးငါဆိုင်ကယ်ဆိုင်ကိုသွားရတယ် (ပျော်ရွှင်သောဂီတ) စက်ဘီးလမ်းကြောင်းသည်နှင်းဖုံးနေသည်။
အိုကေဆိုင်ကယ်ဆိုင်မှာကြိုဆိုပါသည်။ မင်းဒီမှာဒီမှာအသစ်ဖြစ်နေရင်ဟဲလိုငါ arlee ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်စက်ဘီးဆိုင်ကိုစက်ဘီးစီးရန်မိသားစုများကိုအမှန်တကယ်အားပေးသောမိသားစုဆိုင်ကယ်စက်ရုံ Bike Shop Girl ပိုင်ဆိုင်သည်။
ဒီချန်နယ်နဲ့ကျွန်တော့်ဆိုင်ကယ်ဆိုင်မှာ၊ ကျွန်မရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကားတွေကိုအိမ်မှာထားဖို့ကူညီဖို့ပါ။ ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းတွင်ကုန်စုံစျေးဝယ်ထွက်ခြင်း၊ ကျောင်းတက်နိုင်မှုနှင့်စက်ဘီးဖြင့်မည်သို့စွန့်ခွာခြင်းစသည့်အကြံပြုချက်များ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ၊ အထွေထွေလမ်းညွှန်များကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကုန်တင်စက်ဘီးများ၊ ကလေးငယ်များစက်ဘီးများနှင့်လျှပ်စစ်စက်ဘီးများပေါ်တွင်အမှန်တကယ်အာရုံစိုက်သည်။
အကယ်၍ သင်ဤအရာများကိုလိုအပ်လျှင်အောက်ပါဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါ၊ ကျွန်ုပ်ဆိုင်ကယ်ထဲသို့ ၀ င ်၍ ကျွန်ုပ်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ဆိုင်ကယ်ဆိုင်လေးတစ်လျှောက်လှည့်လည်သွားမည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဒီတော့ဒီနေ့ငါသောကြာနေ့ကဇနီးမောင်နှံတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေမှာပေါ့၊ သူတို့ကစက်ဘီးအသစ်တွေနဲ့လာတာဆိုတော့သူတို့လိုအပ်တာကိုသိချင်လို့လား။ သူတို့သည်သူငယ်ချင်းအသစ်များဖွဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဤသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သည်မြို့ပြစက်ဘီးအသစ်များသာရရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါလူတွေကိုပြောချင်တယ်၊ မင်းသင်သိတဲ့အရာအားလုံးနဲ့စတင်ပါ။ ဒါကပထမအဆင့်ဖြစ်တယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ငါကလူတွေကိုငါစတာ။
ပြီးတော့သင်ပထမ ဦး ဆုံးခရီးစဉ်နှစ်ခုကိုလုပ်ပြီး၊ ဟေ့ငါကော်ဖီတစ်ခွက်ရချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်သော့ခတ်ထည့်လိုက်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဟေးငါစက်ဘီးစီးတာရှည်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ငါတို့လမ်းအတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အကြောင်းအရာတွေကိုပြောကြမယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်တိုင်းလိုအပ်တဲ့အခြေခံကိုပဲကျွန်တော်စချင်တယ်။
ဒါကြောင့်မင်းကိုမင်းဆိုင်မှာသွားနေတုန်းလမ်းလျှောက်မယ်။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးလိုအပ်သည်မှာသံခမောက်ဖြစ်သည်။ သံခမောက်လုံးက ၄၅ ကနေ ၄၅ အထိအထိရှိတယ်၊ တစ်ချိန်ကကျွန်တော်ဒေါ်လာ ၃၅၀,၄၀၀ ဝယ်ခဲ့တယ်။
ဒီမှာငါ့အကြိုက်ဆုံးနေ့စဉ်ဆိုင်ကယ်သံခမောက်လုံး၊ တောင်နှင့်လမ်းသီးခြားခမောက်စုံနှစ်ခုနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုငါပြမယ်။ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်သင်ဘာလုပ်မည်ကိုမသိသောယေဘုယျသူများအတွက်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးသံခမောက်သည် Kali Chakra Solo ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖြုတ်တပ်နိုင်သော visor ရှိပြီးနောက်ကျောတွင်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ညှိနိုင်သည်။ ကစုံတွဲတစ်တွဲကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား, လာ $ 45 ဟုတ်သလော လေဝင်လေထွက်ကောင်းရန်မလွယ်ကူပါ။ သင်ဤအရာကိုတင် ထား၍ ၎င်းသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုမှဒေါ်လာ ၆၀၊ ၇၀ ခမောက်ကဲ့သို့ ပို၍ ခံစားရသည်။
တူညီသောစျေးနှုန်းအတွက်သာမန်မြို့တော်ဆိုင်ကယ်ခမောက်ကိုသင်ရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ Lazer သည်သင်၏ Nutcase ဖြစ်သည်။ ငါ Lazer Next ကိုတကယ်ကြိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ visor ကိုဒေါ်လာ ၄၅ ပေးပြီးလေကောင်းလေကောင်းလေလေလေလေလေလေကောင်းလေလေလေမလေပါပဲ။ ဒါကြောင့်သင်အများကြီးချွေးထွက်လျှင်ဤသည်ငါအကြံပြုသည့်သံခမောက်လုံးစတိုင်မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ကျော၌ကောင်းသောသဘောထား။ အချို့ကို Velcro သို့မဟုတ် pads များဖြင့်အလွယ်တကူညှိနိုင်သည်။ သို့မှသာကောင်းမွန်သောချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဒါကအလင်းပေါ့၊ ခလုတ်ကဘက်ထရီပါ။
ဒီတော့သင့်မှာကလေးငယ်တွေရှိရင်ဒီပစ္စည်းကိုယူပြီးလွှင့်ပစ်လိုက်ပါ၊ ဒါပေမယ့်အလင်းရောင်ကအရမ်းလှတယ်။ ဒါက Kali ဆီကသံခမောက်အသစ်ပါ၊ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Danu ထွက်လာပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Kinda သည်လေ၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော်လည်းတူညီသည်။
ဒီ visor ဟာဖြုတ်တပ်လို့ရတယ်၊ နောက်ကျောမှာညှိရလွယ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ဒီသံခမောက်လုံးကိုကောက်ယူရမယ်။ ထူးဆန်းတယ်ပေါ့။ သူ၌၎င်းသည်အလွန်အေးမြသောသံလိုက်လည်ပတ်မှုပုံစံပုံစံရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့်ဖွင့ ်၍ ပိတ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Kali Danu မြို့တော်အသွင်အပြင်အတွက်လေဝင်လေထွက်ဒေါ်လာ ၆၀ နဲ့အတူငါဒီသံခမောက်ကိုတကယ်ကြိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါစျေးနှုန်းလှေကားတက်, ငါမဝတ်ဆင်သောအခြားသံခမောက်လုံးတွေအများကြီးရှိပါတယ်, ငါမြို့စက်ဘီးစီးအပေါ်တကယ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်ငါအဘယျသို့ငါဝတ်ဆင်ဒါကြောင့်ငါနောက်သို့ Kali အလယ်ပိုင်းလာ, ဒီငါဆောင်ခဲ့သောများအတွက်သံခမောက်လုံး ငါနှင့်အတူကာလီ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ပြီးလမ်းသံခမောက်ကဲ့သို့ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ကျောဘက်တွင်အလင်းရောင်ရှိသည်။
ဤ ၂၀၂၀ မီးသည်သင်အခြားသံခမောက်၌တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်းထပ်မံအားသွင်းနိုင်သည်။ $ 80 ပြီးတော့အဲဒါကိုယုံဖို့အတွက်အဲဒါကိုကောက်ရမယ်ပေါ့။ ဤကဲ့သို့သောမြို့မျိုးတွင်ကျွန်ုပ် ၀ တ်ဆင်သည့်နောက်ဆုံးခမောက်သည် Kali City ဖြစ်သည်။
သင်သည်ငါဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်ငါ့ကိုလိုက်နာလျှင်, သင်ဤသံခမောက်လုံးကိုမြင်ကြပြီ။ သူ့မှာတကယ့်ကိုအေးအေးဆေးဆေးသော visor ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် visor သံခမောက်ကပေါ်လာတယ်၊ အပြည့်အဝအရောင်ထွက်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်မီးခိုးထွက်လာတယ်။ ပြီးတော့သူဟာကယ်တင်ခြင်းရတယ်။ ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှဒေါ်လာ ၂၀၀ အထိစက်ဘီးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သံခမောက်များပါ ၀ င်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ကြာရှည်ခံသည်။ အချို့မှာဤ GoPro Mount ရှိသည်။
လမ်းသံခမောက်များသည်ဒေါ်လာ ၉၀ မှစတင်သည်၊ ဒေါ်လာ ၂၅၀ အထိတက်နိုင်သည်၊ မိုက်မဲသောပေါ့ပါးခြင်း၊ လေစီးဆင်းမှု၊ spandex အမြောက်အများရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နံပါတ်တစ်သံခမောက်ဖြစ်သည်။ သင်မြင်နိုင်သည်အတိုင်း၊ တကယ့်ကောင်းတဲ့အရာအချို့နှင့်ပါ ၀ င်ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသည့် ဦး ထုပ်တစ်ခုအတွက်အစီအစဉ်တစ်ခု။ နံပါတ်နှစ်တစ်ကြမ်းပြင်စုပ်စက်။ သူတို့က ၂၀ ကနေငါဆိုင်မှာသုံးတဲ့ဒေါ်လာ ၂၀၀ ပါ။
ကျွန်ုပ်သွားလိုသည့်နေရာသည် JoeBlow Sport ၂ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုနယ်လှည့်စက်ပြင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပြီးသုံးနှစ်အကြာတွင်အကြီးအကျယ်သုံးသောကြောင့်ခေါင်းကိုအစားထိုးခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာကြမ်းပြင်စုပ်ယူပါ။
အကယ်၍ သင်သည်တစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်၊ လေးကြိမ်မောင်းလျှင်၊ သင်၏တာယာများကိုတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်တင်ရမည်။ သင်အလုပ်လုပ်သောပန့်ကိုလိုချင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ထွက်ရန်စတင်၊ စီးနင်းရန်ပိုမိုလုပ်ရန်၊ စွန့်စားခန်းလုပ်ရန်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်တာယာများကိုပြောင်းလဲရန်စတင်ဆုံးဖြတ်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ပါကကျွန်ုပ်အားလုံးဝမအကြံပေးသောပြားချပ်ချပ်ကိရိယာအစုံအလင်ကိုစတင်လေ့လာကြပါစို့၊ မင်းဝယ် မင်းရဲ့အဝတ်အစားတွေအကြောင်းမင်းအခုပြောတော့မယ်။ ဦး ခေါင်းအကြောင်းပြောကြစို့၊ သွားကြကုန်အံ့ကုန်းနှီးအိတ်များကဲ့သို့သောအရာများသည်ကုန်းနှီးအောက်တွင်သွားကြသည်။
ပင်စည်နှင့်ထိပ်ပြွန်အကြားကိုက်ညီသော bento သေတ္တာတစ်ခုရှိသည်။ အကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သောအလျားလိုက်အပေါက်ပါသောအိတ်ကပ်များရှိပါသည်။ သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြပေးပါရစေ။
ဒါကငါ့ရဲ့နေ့စဉ်စက်ဘီးအများစုလိုပဲ။ ပြီးတော့ငါကဒါတွေကိုတကယ်လို့များအားကစားဆိုင်ကယ်စီးခြင်းအတွက်သုံးပြီးငါတို့မှာရေစာမလုံလောက်လို့ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်၏အိတ်များထဲမှထုတ်ပြီးစက်ဘီးပေါ်တွင်တင်ခြင်း၏အဓိကပရိသတ်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်သင်၏ဥစ္စာကိုသယ်ဆောင်ချင်သနည်း။ ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသလော ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသံခမောက်တွေလုပ်တယ်၊ စုပ်စက်တစ်ခုလုပ်တယ်၊ မင်းတို့ပစ္စည်းတွေကိုသယ်ပြီးငါတို့နောက်ဆုံးမီးမဟုတ်သေးဘူး။
ဒါကြောင့်စက်ဘီးလုပ်ငန်းမှာမြင်ရဖို့ဒါမှမဟုတ်ကြည့်ဖို့မီးတွေကိုဖြိုလိုက်တယ်။ မြင်နေရခြင်းသည်ရိုးရှင်းသည့်မျက်တောင်ခတ်သကဲ့သို့ $ 20 ရှေ့နှင့်နောက်ကျောကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ မြင်ရတာကဒေါ်လာ ၄၀ ကနေ ၇၀ အထိပိုများမှာပါ။ အများစုက USB အားသွင်းကြလိမ့်မယ်ဘာလဲ။ ကောင်းပါတယ်၏မျိုး။
ဒါ့ကြောင့်ငါအသုံးပြုပြီးရောင်းတဲ့မီးကိုပြပါရစေ။ ဒါဆို Planet Bike Lights ကလူအများစုကို 'beမြင်' မြင်ကွင်းအတွက်ရောင်းလိုက်တာပါ။ အနက်ရောင်အစေး၊ မင်းကိုကျော်မသွားချင်ဘူး ထိုအခါငါသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်မောင်း။
ငါကားမောင်းနေတဲ့အာရုံကိုမမြင်တွေ့ခင်မှာငါဖြစ်ချင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အလင်းကိုတောက်ပနေတဲ့အလင်းရောင်နဲ့သူတို့ရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်ချင်လို့၊ ငါ့ရဲ့အလင်းရောင်ဟာနေ့ရောညပါအလင်းရောင်နဲ့ရှိနေတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်အပြေးသမားတွေနဲ့ဒီအရာအားလုံးတွေရှိတယ်။ အလင်းရောင်ကိုအမြဲတမ်းထွန်းလင်းထားပါ။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့မှကြည့်ရှုရန်တက်ကြွသောကလစ်လုပ်ရန်အမှောင်ထဲတွင်သင်မြင်နိုင်သောကောင်းသောအရာတစ်ခုကို USB charging နှင့် lithium ဘက်ထရီများမှ ၃၅ မှ ၆၅ အထိရှာဖွေနေသည်။ သင်၏အလင်းကိုကျော်လွန်သွားနိုင်သောကြောင့်သင်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအလင်းကိုပိုမိုလိုချင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မြန်သောကားမောင်းနေသောကြောင့်သင်တုန့်ပြန်ရန်အချိန်မရှိသောကြောင့်ဝေးဝေးမှမမြင်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်မင်းတို့ဘယ်လောက်မြန်မြန်သွားမယ်ဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီးပိုတောက်ပတဲ့အလင်းကိုလိုချင်တယ်။
ပြီးတော့ငါဒီမှာရှိနေလို့ဒီဂတ်စ်ကိုငါအရမ်းချစ်လို့ပေါ့။ ဘီးမီးလုံးအခုအချိန်မှာငါ့အရာဖြစ်ကြ၏။ သူတို့ကဘေးထွက်မြင်နိုင်အောင်လုပ်ထားတယ်၊ တောက်ပတယ်၊ လူတွေရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်တယ်။ ငါကသူတို့ကို monkey light n204 ကိုချစ်တယ်။ ညဘက်မှာစီးမယ်ဆိုရင်သူတို့စက်ဘီးထဲကိုမျောက်မီးတချို့ထည့်မယ်၊ သူတို့ကမပေးရဘူး၊ ပေးတာမဟုတ်တာသူတို့ကိုငါချစ်တယ်ဒါဆိုသင်ဘာထင်သလဲ အဆိုပါ Talking Head ဆောင်းပါး? ကျွန်ုပ်၏အပြီးသတ်ရည်မှန်းချက်မှာလူများအားကျွန်ုပ်တို့ကိုစက်ဘီးစီးခြင်း၊ စက်ဘီးပေါ်ခုန်ခြင်းနှင့်ကော်ဖီသောက်ရန်လာခြင်းနှင့်တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးခြင်းများကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီပေးရန်ဖြစ်သည်။ သင်သိသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်ရည်မှန်းချက်မှာ သင်၏စက်ဘီးကိုစီးပြီးအိမ်တွင်ကားထားခဲ့ပါ။
စက်ဘီးဆိုင်မိန်းကလေးနှင့် Arlee နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့သည်။ ဆိုင်ကိုလာလည်ပတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကုန်ကျစရိတ်။ သမားရိုးကျဉာဏ်ပညာသည်၎င်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဝယ်ပါပြည့်စုံဆိုင်ကယ်, နှင့်နှိုင်းယှဥ်လျှင်အဆောက်အ ဦးဘောင်ကနေတ ဦး တည်းတက်။ ဤသည်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်မှန်သည်။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်အသုံးပြုထားသောဘောင်များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင်အဆောက်အ ဦးတစ်ခါတစ်ရံတွင် frame တစ်ခုတက်နိုင်သည်စျေးသက်သာသည်option ကို။ဇန်နဝါရီလ 24, 2019
(အံ့သြဖွယ်ရာဂီတ) - GMBN Tech မှမေးရန်ကြိုဆိုပါသည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ ၃၀ ခုမြောက်ပြပွဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နည်းပညာဆိုင်ရာတောင်ကြီးတောင်ငယ်များ၏အရာများအကြောင်းသင်၏မေးခွန်းများကိုသင်ပေးပို့နိုင်သည့်အပတ်စဉ်ပြပွဲဖြစ်သည်။ စက်ဘီးအကြောင်းနားလည်ရန်သင်ယူရန်သင့်လျော်သောအဖြေကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်မျှော်လင့်ပါသည်။
သင်၏စာရင်းများကိုလက်ခံရရှိရန်၎င်းတို့ကိုမျက်နှာပြင်အောက်ခြေရှိအီးမေးလ်သို့ပို့ပါသို့မဟုတ်အောက်ပါမှတ်ချက်များတွင်ထည့်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ #askGMBNtech ကို သုံး၍ သင်၏မှတ်ပုံတင်ကိုလေပြေဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့် Elias Sandell နဲ့ဖြောင့်ခုန်ပြီးခုနစျခု၊ ရှစ်ဆ၊ ငါ့မှာယူစရာတစ်ခုထဲရှိတယ်။ ငါသုံးသင့်မသင့်ကိုမသိဘူး။
အခြေခံအားဖြင့်သူတို့ဟာကွင်းဆက်ကိရိယာတွေနဲ့ Eliasthe နဲ့တော်တော်ဆင်တူပေမယ့်၊ ၁၂ မြန်နှုန်းကွင်းဆက်သည်ဂီယာ ၇ ခုထက်များစွာကျဉ်းသည်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့အများကြီးလုပ်လိမ့်မယ်။
ဒီဟာကအသေးအဖွဲဂီယာတွေကြားမှာရပြီးသင်ဟာမြန်နှုန်းခုနစ်ကွင်းဆက်ထက်အများကြီးပိုလုပ်နိုင်တယ် သူမကယခုမည်သည့်ကွင်းဆက်ကိုမဆိုချိုးဖျက်နိုင်သည်၊ ပြန်လည်စုစည်းနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်မည်သည့်ကွင်းဆက်ကိရိယာနှင့်မဆိုပြန်လည်ထည့်သွင်းနိုင်သော်လည်း၊ အကယ်၍ သင်သည်ကွင်းဆက်ကိရိယာတစ်ခုပေါ်တွင်မှားယွင်းသောသဟဇာတဖြစ်မှုကိုအသုံးပြုနေလျှင်သင်ကမေးရိုးများမဟုတ်ပါက pin ကို ဖြတ်၍ မောင်းနှင်ခြင်းသည်အနည်းငယ်ခက်ခဲသည်။ စနစ်တကျချိန်ညှိပြီးဘောပင်ကိုနောက်တစ်ခါမမောင်းပါနဲ့။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်ဤဥယျာဉ်ကိုယခုထိန်းသိမ်းထားပါကကျွန်ုပ်ဆိုလိုရင်းကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်တော်ဒီကိုဖျက်လိုက်ရင်ဒီဟာပေါ်ကမေးရိုးတွေဟာရွေ့လျားလို့ရလိမ့်မယ်။ ဒါကကွင်းဆက်အရွယ်အစားအားလုံးနဲ့သဟဇာတဖြစ်လို့ပါ။ ဆိုလိုတာကတော့နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ သူတို့ကနည်းနည်းထူးဆန်းလို့သူတို့ဟာ Campagnolo ပစ္စည်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။
၎င်းသည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသောအရာများကိုပြုလုပ်သောအီတလီကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် 12-speed chains များနှင့်တစ်ပြိုင်နက်အပြန်အလှန်အားဖြင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ယခုတွင်၎င်းသည် Shimano, Park, Topeak စသည့်ထုတ်လုပ်သူကြီးများပြုလုပ်သောကွင်းဆက်အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သော်လည်းအခြားလူများထံမှစျေးကွက်တွင် emons အမြောက်အများထွက်ပေါ်လာသည်။
သူတို့ဟာအနည်းငယ်မရေမရာဖြစ်နေပြီးသူမရောင်းတာကရှစ်မြန်နှုန်းပါ၊ ဒါပေမယ့်သူက ၁၀ နဲ့ ၁၁ နှစ်တွေမှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသင်တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုသင်အမှန်တကယ်စမ်းမကြည့်မချင်း၊ လျှို။ အမှားအယွင်းမရှိဘူးဆိုရင်အမှားအယွင်းမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ကွင်းဆက်ကိုပြန်လည်ခွဲခြားရန်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်ကွင်းဆက်တစ်ခုချိတ်ဆက်ရန်အတွက်ရိုးရှင်းသည့်ကိရိယာ - နည်းစနစ်ဖြစ်သည်။ ကွင်းဆက်မှာသင့်မှာအပြင်ဘက်တစ်ခုရှိပြီးအတွင်းခန်းလည်းရှိတယ်၊ အလယ်ဗဟိုမှာ roller တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကွင်းဆက်မှာပြောရုံသာပြောရမယ်။ ကွင်းဆက်ပေါ်ရှိကွင်းဆက်ကိရိယာကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်ကွင်းဆက်ကိရိယာကိုသင်အသုံးပြုသောအခါ၊ ကွင်းဆက်ကိုမေးရိုးများထဲ၌နေရာ ချ၍ pin ကိုပြန်တွန်းလှန်ပါ။
သင်ရုံထိုင်နိုင်ဘူး။ ဒါဟာ snaps နှင့်အဆင်မပြေမှလွဲ။ ဘာမျှတကယ်ဖြစ်ပျက်။ ဥပမာအားဖြင့်ကုန်းနှီးမှထုတ်ယူခြင်းကဲ့သို့သင်၏ဝန်ကိုသွားသောအခါသင့်ကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပါကသင်ကဘားတန်းကိုကျော်သွားလိမ့်မည်။ သင်မျှော်လင့်မထားသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။
သတိထားပါ သင့်ရဲ့ကွင်းဆက် tool ကို alignment ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါပြီးတော့သင်သွားကြဖို့ကောင်းသောဖြစ်ကြသည်။ နောက်တစ်ခုကတော့ Raymond Paculan Hey Doddy ရဲ့ဘရိတ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာပါ။ ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးတွေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ရေမွန်၊ အဆက်အသွယ်သန့်ရှင်းရေးကိုသုံးလို့ရမလား၊ disc brake pads နဲ့ discs တွေကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်မလားလို့မေးချင်ပါတယ်။ အဲဒီမေးခွန်းကိုဖြေပါ
၎င်းသည်သင်၏ဘရိတ် pads များအပြင်အရည်များများပါ ၀ င်သည့်အထူးဘရိတ်သန့်ရှင်းရေးကိုမသန့်ရှင်းနိုင်ပါ။ အဆက်အသွယ်သန့်ရှင်းရေး၏အားသာချက်မှာမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင်ရနိုင်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမြောက်အများသည်အဆက်အသွယ်များကိုပိုမိုသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပြီးသင့်ကားကိုစက်နှိုးခြင်းကဲ့သို့သောလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတွင်အသုံးပြုခြင်းသည်သင့်အတွက်အန္တရာယ်ကင်းသည်မှာသေချာသည်။ ၎င်းတွင်ရေရှိကောင်းရှိနိုင်သလား။ ဂဏန်းအရေအတွက်။
ပြီးတော့သင်ဟာပတ် ၀ န်းကျင်မှာသုံးဖို့အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။ အခုဘရိတ်သန့်ရှင်းမှုမှာ isopropyl alcohol ပါ ၀ င်ပေမယ့်အနည်းငယ်ပိုပြီးရန်လိုလာပြီးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတာသေချာပေမယ့်ကျွန်တော်တော့မထင်ပါဘူး၊ ဒီဟာကအထူးသဖြင့်သူတို့တော်တော်များများကတော့ထင်ပါတယ် အချို့သောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောပလပ်စတစ်များကဲ့သို့ circuit board ကဲ့သို့အသုံးပြုရန်အလွန်ပြင်းထန်လိမ့်မည်။ သင်၏မေးခွန်း၏အဖြေ၌ဟုတ်ကဲ့။
မင်းတို့ Nitrol လက်အိတ်တစ်မျိုးမျိုးလိုချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကတော်တော်လေးစုနေလို့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမင်းလက်ထဲမရောက်စေချင်ဘူး။ ဒါ့အပြင်သင့်အသားအရေမှာရှိတဲ့အဆီများကိုဘရိတ်အုပ်များသို့သာသယ်ဆောင်သွားခြင်းကိုမလိုလားပါ၊ အလုပ်ရုံသုတ်ပဝါသည်ဤနေရာတွင်အချို့ကိုဒီမှာ; အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောသူမြားကိုစျေးကွက်အပေါ်ရှိပါတယ်။
သူတို့ကတော်တော်လေးစက်မှုလုပ်ငန်းပဲ။ ဤသည်အထူးသဖြင့်တ ဦး တည်းကို Scott လို့ခေါ်တဲ့တီးဝိုင်းကလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအရာကိုကားဂိုဒေါင်များနှင့်ရိုးရာအလုပ်ရုံအမျိုးမျိုး၌တွေ့ရမည်။
အားလုံး Isaac ဇာက် ၂၃၂ မှလာသည်။ ချည်အောက်ခြေကွင်းခတ်တပ်ဆင်နိုင်ဖို့သင်ကအောက်ခြေကွင်းခတ်ကိုစာနယ်ဇင်း - အဆင်သင့်အောက်ခြေကွင်းခတ်ဘောင်တွင်ချည်နိုင်ပါသလား။ မဟုတ်ဘူး၊ မင်းလုပ်နိုင်မယ်လို့မထင်ဘူး အောက်ခံကွင်းခတ်တစ်ခုနှင့်အတူ, ဝက်ဝံများသောအားဖြင့်အပေါက်များထဲကဖြစ်ကြသည်။
Bodge နည်းလမ်းတစ်မျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ဒါကိုလုံးဝအကြံပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါကဒီဇိုင်းရေးဆွဲဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက် fit နှင့်သင်ရုံစနစ်တကျ install လုပ်နှင့်သင် streamless မောင်းနှင်မှုရှိသည်သေချာပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးအဲရစ် Camacho မှ။
ဒါကြောင့်ငါနောက်ကွယ်မှာအများကြီးရှိပြီးနောက်ဖြစ်စဉ်များအတွက်အခြားအရာတစ်ခုခုရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်, ငါသတိရှိရှိ, ငါ့အချိန်ကိုယူပါ။ ဒါပေမယ့်ဆိုလိုတာကခင်ဗျားကိုယ်တိုင်စက်ဘီးကိုဆောက်ရတာရယ်စရာအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုလို့ထင်တယ်။ လူ၊ စက်ဘီးသို့မဟုတ်ပြိုင်ကားစက်ဘီးစီးသူအားလုံးကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာလုပ်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။
ခင်ဗျားဟာစျေးကြီးတဲ့စျေး ၀ ယ်စာရင်းစာရင်းကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြန်ရေးရင်းနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ အဲ့ဒီကိစ္စမှာ Komoso, Canyon (သို့) အဲဒီအမှတ်တံဆိပ်တွေလိုဖြောင့်ဖြောင့်စတိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဝယ်တာပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင်ဟာ base groupset နဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ frame နဲ့ fork combo ကိုရရှိနိုင်တယ်။ ပြီးတော့အဲဒီမှာဂီယာကိုထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ၊ ဆိုင်ကယ်ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်သင်တစ်ချိန်တည်းမှာငွေစုဆောင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဘေးထွက်တွင်အနည်းငယ်ချွေတာပါနှင့်သင်စက်ဘီးစီးသည့်အခါအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်၏ချည်နှောင်ထားသည့်အရာများကိုဟောင်းနွမ်းစွာသင်မွမ်းမံထားသောနေရာတစ်ခုသို့သွားပါ၊ သူတို့နောက်လာလိမ့်မည်။ ထို့နောက်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှသင့်တွင်ပိုကောင်းသောအစိတ်အပိုင်းများပါသည့်စက်ဘီးတစ်စီးရှိသည်။ သိသာထင်ရှားသည်မှာသင်ထိုသို့ပြုလုပ်လိုပါကသင်ထည့်သွင်းရန်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ frame သည်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်သိမ်းဆည်းထားလိုသောအရာသည် frame သည်၎င်းနှင့်သင်ကြီးထွားဖွယ်ရှိသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်ဟာကြီးထွားနေတုန်းပဲဆိုပါစို့၊ စက်ဘီးစီးပြီးကိုယ်ထိလက်ရောက်ကြီးထွားဖို့နေရာလုံလုံလောက်လောက်ရှိဖို့လိုပြီးသေချာတဲ့အာမခံချက်ရှိရမယ်။ အကယ်၍ သင့်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှိခဲ့ပါကပြoccursနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပါကထုတ်လုပ်သူမှအရာအားလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားရန်သင်သေချာစေလိုသည်။ အခြားစဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ခုကတော့ထုတ်လွှင့်မှုရှိအစိတ်အပိုင်းအချို့ဟာအရေးမကြီးပါ။
လုံးဝဆီလျှော်ပါတယ် ဒါကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကုန်သွားမှာပါ၊ ပြီးတော့အဲဒါကိုပိုကောင်းတဲ့အရာတွေအထိမြှင့်တင်နိုင်ပါတယ် မည်သည့်အခွင့်အလမ်းကိုမျှမချပါနှင့်။
သင်ကလေးလံသောဘီးများပေါ်တွင်ပင်သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီးပေါ့ပါးသောဘီးများကိုလည်းဝယ်နိုင်သည်။ ဒါကပြaနာမဟုတ်ပါဘူး။ တာယာတွေသူတို့ကကုန်သွားပြီ။
သင်၏ဒေသစီးနင်းမှုနှင့်ကိုက်ညီမည့်တာယာများကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သူတို့ကိုမီးသတ်ပစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဆိုင်းထိန်းစနစ်နှင့်ဆည်သို့ရောက်သောအခါဘတ်ဂျက်လူအချို့သည်သူတို့၏ဈေးနှုန်းကိုလျှော့ချရန်ဘတ်ဂျက်စက်ဘီးပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်လူအများစုသည်အိမ်တွင်းနှင့်မပတ်သက်နိုင်ပါ သင်၏စက်ဘီးကိုသင်ဝယ်သောအခါသင်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်လမ်းဆုံလမ်းခွနှင့်အမ်ဖရာကိုရရှိသည်၊ ၎င်းသည်ထိုလမ်းဆုံလမ်းခွကိုချိန်ညှိနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ နောက်မှနွေ ဦး ရာသီလိုအရာများကိုသင်မှာယူနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုရရှိလိုပါကသင်ကကူရှင်သန်ခြင်းအရာတစ်ခုကိုကွင်းကွင်းအတွင်းပြောင်းနိုင်သည်။
သင်ဘောင်နှင့်အတူလိုပဲနှင့်အတူကြီးထွားဖို့တစ်ခုခု။ အကယ်၍ သင်၏အာရုံသည်ကောင်းမွန်သောလမ်းဆုံလမ်းခွ၊ ကောင်းသော damper၊ ကောင်းသော frame တစ်ခုရရှိရန်သာဖြစ်ပါကကျန်ရှိသောအရာများသည်သင့်အပေါ်မူတည်သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ၊ သင်စုဆောင်းနေတဲ့အရာတွေအကြောင်းပိုမိုလေ့လာနိူင်ပါတယ်။
ငါတကယ်စိတ်ဝင်စားတယ် ကောင်းပြီ၊ ဒါကစျေးဝယ်စာရင်းထဲကမေးခွန်းတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် Bugboy 152000, Doddy, မှခင်ဗျားကိုကူညီနိုင်မလား။ စေ့စေ့စပ်စပ်သန့်ရှင်းရေးအတွက်ကျွန်ုပ်၏ Raceface effect cranks များကိုဖယ်ထုတ်ရန်မှန်ကန်သော tool ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသလား။ ဒီနှစ်ဆောင်းရာသီသိုလှောင်မှုမတိုင်မီကျွန်ုပ်၏ Santa Cruz ကိုလုံးဝဖယ်ရှားချင်ပါသည်
ငါသိသည်အတိုင်း, ဤ cranks အခြားသူများနှင့်ကွဲပြားခြားနားကြသည်မဟုတ်။ စက်ဘီးမှ crank ဖယ်ရှားရန်သင့်အနေဖြင့် 8 millimeter hex လိမ်ဖဲ့ခြင်းလိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်ပင့်ကူသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုဖြစ်စေ၊ Tank T25 သို့မဟုတ် 5mm Allen သော့ခတ်ရန်လိုအပ်သည်၊ ဤ crank ကိုအသုံးပြုသည်။
စက်ဘီးမှအောက်ခြေခုံးကိုဖယ်ရှားရန်ထိုအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့် BB ကိရိယာတစ်ခုသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို cranks သို့မဟုတ် ၀ င်ရိုးကိုထိတ်လန့်ရန်သင်သံတူတစ်ချောင်းလိုလိမ့်မည်။ ပိုမိုပျော့ပျောင်းသောအဆုံးသို့မဟုတ်ရာဘာအဆုံးသည်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ သို့မှသာပစ္စည်းများကိုပြန်လည်စုဆောင်းသည့်အခါထိုတွင်ရှိသော ၀ င်ရိုးကိုမပျက်စီးစေပါ။
အကယ်၍ ဤအရာကိုလုပ်ဆောင်ပါကသင်သည် threadlocker ကိုလည်းလိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်၏လက်ကိုကာကွယ်ရန်သုတ်ပဝါနှင့်လက်အိတ်အချို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ ပြီးတော့မင်းကိုအားသန်တဲ့ de-fetter လိုအပ်တယ်။
ပြီးတော့ငါအကြံပြုချင်တာကရေခဲမုန့်ဟောင်းနွမ်းတဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်တွေလိုမျိုးအရာတွေကိုကိုင်ထားပါ။ အထူးသဖြင့်ပြန်လည်အသုံးပြု။ မရနိုင်သောအနက်ရောင်ပလတ်စတစ်များကိုအသုံးပြုရန်အတွက်၎င်းအား degreaser ကိုထည့်သွင်းရန်နှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုကပ်ထားရန်နှင့်ကောင်းမွန်စွာသန့်ရှင်းရေးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရာများအတွက်သင်ဆဲဆဲဖြစ်သည်။ သွားတိုက်တံအဟောင်းသည်ပတ်ပတ်လည်၌ထွင်းဖောက်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယမှကင်ဆာအားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းသည်။
သွားကြကုန်အံ့။ ဒါပဲ။ သင်လိုအပ်သည့်ထူးခြားသည့်အရာမရှိပါ။
ဒီလျောက်ပတ်သောကိရိယာများကိုသာ၎င်းနှင့်အတူဆက်လုပ်ပါ။ ကောင်းပြီ၊ တော်တော်လေးအေးဆေးပဲ။ ဤသည် Mainz က Man ကနေဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျငါကဲ့သို့, သင်တစ် ဦး torque လိမ်ဖဲ့ခြင်းကိုအသုံးပြု။ ငါအမြဲတမ်း torque လိမ်ဖဲ့ခြင်းအမြဲနိမ့်သော setting တွင်သိုလှောင်ထားရန်အကြံပြုသည်ကိုသိလိုချင်တဲ့ငါတောင်းပန်တစ်ခုခုသတိပေးဤသည် Park ATD သက်ဆိုင်? ငါထင်သည်နှင့်ငါပြီးနောက်အသုံးပြုမှုပြီးနောက်ငါ့အ 4NM သတ်မှတ်ထားလေ့ပေမယ့်အွန်လိုင်းအတည်ပြုရန်ဘာမှမတှေ့။ ငါက Parks ကိုမေးရုံတင်ပဲမင်းသိလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ ဒီဟာကိုပြောတဲ့ဘယ်စာပေကိုမှမတွေ့ရဘူး။
ပြီးတော့ငါထင်တာကတော့ ATD နဲ့မတူနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်၊ အဲဒီလူငယ်တွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ သင်ဤအရာကိုအရင်ကမတွေ့ဖူးပါက၊ ထိန်းညှိနိုင်သော torque settings နှင့် bits ဤတွင်ရှိသည်။ ဒီဟာဟောင်း
ဒါက ATD ၁ ပါ။ ၁.၂ အပိုဆောင်း features တွေပါ ၀ င်တဲ့ 1.2 ရှိပြီ။
သင်သည်သင်၏ bits ကိုမဆုံးရှုံးကြဘူးဒါကြောင့်သံလိုက် bit ကိုကိုင်ဆောင်သူ။ ၎င်းသည်ဂန္ထဝင် ratcheting အတွက်အခြားနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ငါသိသလောက်ကတော့ ratchet လက်ကိုင်များသည်အမြဲတမ်းပြန်လည်စတင်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပြည်တွင်း၌အလုပ်လုပ်သည်နှင့်အမျှသုညမဟုတ်ပါ။ ယခုအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်ကိုသတိပြုပါ။
သင်သည်သင်၏ torque setting သို့ရောက်ရှိသောအခါသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပုံစံကိုနှိပ်လိုက်ပါလိမ့်မည်၊ သို့သော်သင်ဆဲသုံးနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ငါအဲဒီမှာအတွင်းပိုင်းစနစ်သက်သာစေဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ထင်ပါတယ်။ ATD များသည်နည်းနည်းကွဲပြားသည်။ သူတို့အလုပ်လုပ်ပုံ။
သင်တကယ်မလုပ်နိုင်ပါ။ သင်ကျော်တင်းကျပ်လို့မရပါဘူး ၎င်းသည်ကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်ဤကျော်အားလုံးတင်းကျပ်လို့မရပါဘူး။ ဤအရာများသည်အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤအထူးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် 4NM ၌ထားခဲ့ပါကယခုစိတ်ကူးကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်သံသယမရှိပါ။ ဤအရာများကိုတစ်ချိန်လုံးအသုံးပြုနေကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည်။ Torque wrench ပစ္စည်းအားလုံးသည် GCN နှင့် GCM ရှိသူငယ်ချင်းများနှင့်အထူးသဖြင့်သူတို့တွင်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများစွာရှိပြီးစက်ဘီးပေါ်ရှိနူးညံ့သိမ်မွေ့သောယာဉ်ကြောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောကြောင့်သင်ကသူတို့ကိုမတင်းတင်းမနေစေရန်သေချာပါသည်။
အမှုအရာ၏ mountable ဘက်မှာငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဤအတော်လေးအများကြီးသုံးပါ။ အခြားယောက်ျားတွေဘယ်လိုလုပ်နေလဲမသိဘူး ဒါပေမယ့်အဲဒါတွေကိုငါတို့အလုံအလောက်သုံးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့သိမ်းဆည်းမှုမှာပြaနာမဟုတ်ဘူး။
ငါကရေရှည်သိုလှောင်မှုတစ်ခုလို့မင်းထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Park ကိုကျွန်တော်မေးမှာပါ၊ တကယ်တော့ငါတို့မှာဒီနှစ်နှောင်းပိုင်း Park မှာလာလည်ပတ်မယ့်အထူး guest ည့်သည်ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းက Calvin နဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်တဲ့အတွက်ဒါကိုမင်းကိုအမြဲတမ်းပြောနေမှာပါ။
အိုကေ၊ လာမယ့်လည်စည်းကခင်ဗျားအတွက်ပဲ။ ကျွန်တော့်စက်ဘီးအသစ်မှာ ၃၅ မီလီမီတာအနားကွပ်အကျယ်ရှိပြီးပေါင်းတာယာတွေပါ။ ၂.၄ တာယာကိုသုံးလို့ရသလားဒါမှမဟုတ်အနားကွပ်လေးတစ်ခုလိုအပ်ပါသလား။ ၂.၄ တာယာများကိုသုံးနိုင်သော်လည်းအားလုံးမသုံးနိုင်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်ဥပမာအတိတ်မှာ Ibis 7.41 အနားကွပ်တွေရှိတယ်၊ သူတို့ကအပြင်ဘက်က ၄၀ (၄၁) မီလီမီတာ၊ အတွင်းဘက်မှာ ၃၅ ခု၊ ဒါတွေကတကယ်ကိုကျယ်ဝန်းတဲ့အနားကွပ်တွေဖြစ်တယ်။ ၂.၃၊ ၂၃၅၊ ၂၄ နဲ့ ၂.၅ စတဲ့အရာတွေကိုငါသုံးခဲ့တယ်။
သင်အမှန်တကယ်ရန်လိုသောအခါမည်သို့သောထောင့်ကွက်များရှိမည်နည်း။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်းတို့အားထိပ်တန်းတွင်ပြားပြားစေသည်။ A သည်သင်မောင်းနှင်နေစဉ်ပွတ်တိုက်အားတိုးစေသည်။ B သည်ခြေဆွံ့သောအရှိန်မှအစမှူးမတ်များသို့တကယ့်ကိုကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောကူးပြောင်းမှုကိုပြုလုပ်သည်။
တကယ်လို့များဖြစ်ပျက်လာရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ ပြီးတော့သင်အားလုံးဟာကွေးနေမှာပါ။ ဆိုလိုတာကအချက်အလက်တွေကြားကလွယ်လွယ်ကူကူပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင်သူကအထောက်အပံ့အတွက်တကယ်ကောင်းတဲ့ပခုံးရှိတယ်။ သင်၏စက်ဘီးပေါ်တွင်သင်အသုံးပြုနေသောတာယာများပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သင့်တွင်အနည်းငယ်အဝိုင်းလိုက်သောတာယာနင်းပါက၎င်းတို့သည်ပိုမိုကျယ်ပြန်သောအနားကွပ်တွင်၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုပြင်းထန်သောစတုရန်းနင်းတာယာနှင့်ပိုတူနိုင်သည်။
ငါသည်ငါ့ clutch ကိုထည့်သွင်းသည်အထိပွတ်တိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ခြစ်ရာ။ ငါလမ်းကြောင်းပေါ်တက်ပြီး clutch ကိုထည့်တဲ့အခါ, အနိမ့်3မှ4ဂီယာအတော်လေးချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကွင်းဆက်လာမည့် cog အပေါ်ပွတ်တိုက်။ အကြံဥာဏ်တစ်ခုခုလား။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဂီယာအပြောင်းအလဲကိုသက်ရောက်စေတဲ့ clutch အကြောင်းတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး။ သင်ပြောင်းတဲ့အခါလီဗာကတစ်ဆင့်ပိုပြီးအားရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။
ပထမတစ်ခုကခင်ဗျားဟာ clutch တစ်ခုကိုလွှတ်လိုက်တာနဲ့မင်းကဆင်းပြီးဆင်းသွားတာမဆန်းဘူးဆိုတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါပဲလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်အပေါ်ထားခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ငါအားသာချက်ရှိတယ်။
မင်းရဲ့ circuit ကိုပထမနေရာမှာမှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ထားတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သင်ဒီနောက်ဘက် derailleur ပေါ်ရှိ swing voltage ဖြစ်သည့်အထက်နှင့်အောက်အနိမ့်ဆုံး limits screws voltage ကိုလုပ်ပြီးသင်အဲဒီမှာမှန်ကန်သော wire wire ကိုမှန်ကန်စွာထားလိုက်ပြီး၊ ဂီယာပေမယ့် clutch နှင့်အတူ။ ထိုသေးငယ်သောဂီယာစက်များနှင့်ထပ်တူထပ်မံကြိုးစားပြီး clutch ကိုဖယ်ထားပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်မသေချာသည့်အရာအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိကြည့်ပါ။ ပြီးရင်ပြtheနာဆိုတာမင်းသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါထူးဆန်းတာကပထမအချက်အနေနဲ့ရိုးသားဖို့ပြproblemနာဖြစ်သင့်တယ်၊ clutch ကအောက်ပိုင်းလှောင်အိမ်အပေါ်မှာတင်းမာမှုပိုများစေတယ်၊ ​​တစ်ခုခုချောင်နေတယ်၊ ​​ဒါတစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုတာငါပြောလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ derailleur အပေါ်ချောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်တစ် ဦး ဂျော်ကီဘီးသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်ဘီး, ဒီထွက်စစ်ဆေးပါ။
ပင်မကြိုးဆွဲကြိုးပင်လျှင်ချောင်နေနိုင်သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်၎င်းသည်သင်၏ဂီယာကိုအမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်စိတ်ကူး။ မရနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသင်ဖယ်ရှားပြီးသင်ရှာရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ထင်သည်။ ဒီကိုထူးဆန်းသောကြောင့်, Cle, ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။
ငါအရင်ကတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး အိုကေဒါနောက်မေးခွန်းတစ်ခုရဲ့အဆုံးကတော့ GMBN Tech ပါ။ မင်းရဲ့မေးခွန်းအချို့ကိုငါပြန်ဖြေနိုင်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်
အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များမှသင့်ကိုရယူပါ။ အစတွင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအီးမေးလ်လိပ်စာတွင်၎င်းတို့ကိုပစ်ခတ်ပါ။ ပိုကောင်းသောဆောင်းပါးအနည်းငယ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Press fit BB ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆောင်းပါးအတွက်ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။ ဤသည်စာနယ်ဇင်းအဘို့ဤမထိုက်မတန်, ဒါပေမယ့်ငါကအားလုံးချောင်းရေများနှင့်ညည်းတွားရှင်းလင်းရေးမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒီစာမူမှာပါတဲ့ pressfit ကို Exa အနေနဲ့သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Evolution of Maevic Hubs ကိုဒီမှာကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်ဇာတ်လမ်းအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည်အလွန်အေးမြ။ ၎င်းတွင်အချက်အလက်များစွာရှိသည်။ အမြဲတမ်းလိုပဲ GMBN Tech ကို ၀ င်ပြီးဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြဖို့ round glob ကိုနှိပ်ပါ။
subscribe မလုပ်ထားသောသူငယ်ချင်းများ၊ အကယ်၍ သင်သည်နည်းပညာမေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းကိုနှစ်သက်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားလက်မထောင်ပါစေ။
၁ ယှဉ်ပြိုင်ဆိုင်ကယ်သမား နှစ်
နှစ် Merlin သံသရာ နှစ်
၃ ပါဝါမီတာစီးတီး နှစ်ခု *
၄ ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုသံသရာ နှစ်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးသားပါကသင်၏စက်ဘီးကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းသည်အတော်လေးစျေးကြီးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဤအမြင့် Roller II တာယာများကိုယူပါ။ သူတို့ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမဲ့တစ်စုကိုဒေါ်လာ ၁၃၀ ကနေ ၁၅၀ ကြားမှာရှိတယ်။
SunRace မှ ၁၁-၅၀ သွားသောကက်ဆက်ကဲ့သို့သောအရာများသည်သင်၏စက်ဘီးကိုအကွာအဝေးတစ်တန်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင်၏ပိုက်ဆံအိတ်မှဒေါ်လာ ၁၀၀ ယူရပြီးနောက်ဆုံးတွင်တာယာများကုန်သွားတော့မည်ဖြစ်သည်။ တော်တော်လေးစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ ဒီမှာဒီမှာအကုန်လုံးကိုမင်းပြောရင်ဒေါ်လာ ၈၀ တောင်မပြည့်ဘူး။ နေပါ ဦး၊ နောက်လာမည့်ဆိုင်ကယ်ဝယ်ယူမှုတွင်ငွေတစ်တန်မည်ကဲ့သို့စုဆောင်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်ပြပါမည်။ (funky ဂီတ) လူတိုင်းဟေးငါ့နာမည်ယောသပ်ပါ။ ငါခိုးသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေ ၀ ယ်လား၊ ဒါမှမဟုတ်ဒါတွေအားလုံးကိုဈေးပေါပေါနဲ့ဝယ်ဖို့အထူးစပွန်ဆာပေးရေးသဘောတူညီမှုကိုငါသုံးနေလားဆိုတာမင်းတို့တော်တော်များများသိချင်နေကြတယ်။
အဖြေကတော့မဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်ုပ်သည်အသစ်သို့မဟုတ်ပေါ့ပါးစွာသုံးထားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအထူးလျှော့စျေးဖြင့်မည်သည့်နေရာသို့သွားမည်ကိုကျွန်ုပ်ပြပါလိမ့်မည်။ ယခုသင်ဤအလုပ်အတွက်အနည်းငယ်စိတ်ရှည်ဖို့လိုလိမ့်မည်။ ဒီနေရာတွေမှာစာရင်းကန့်သတ်ချက်သိပ်မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ဘာကိုရှာရမှန်းမသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့မကြာခဏစစ်ဆေးရတယ်။
သို့သျောလညျးသငျသညျအကြီးအကျယ်ငွေစုနှင့်အတူဆုခခြဲ့ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်အကြိုက်ဆုံးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ကယ်ဆိုင်အတွက်အစားထိုးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ခုခုကိုအခုပဲသုံးပါ
ငါယေဘုယျအားဖြင့်အသုံးပြုသောအစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းပြောဆိုရန်ခဏယူချင်ပါတယ်။ Pinkbike, eBay သို့မဟုတ် Craigslist တွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများကိုသင်ဝယ်ယူသောအခါစက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်ရှေ့တန်းချိတ်များတွင်အလွန်ကြီးစွာသောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုသင်တွေ့နိုင်သည်မှာလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါ။ ဒါ့အပြင်သင်ဟာဘာမေးခွန်းတွေမေးရမလဲ၊ သင်မကောင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်မခွဲမခွာဖြစ်ဖို့သေချာအောင်ဘာလုပ်သင့်သလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။
ထိုအချိန်တွင်ပင်အရောင်းဝန်ထမ်းတစ် ဦး သည်တစ်ခါတစ်ရံလုံးဝရိုးသားသည်၊ သို့သော်သူတို့၏အစိတ်အပိုင်းသည်ထင်သည်ထက်ပိုဆိုးသည်ကိုသူတို့မသိကြပါ။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်မေးခွန်းများမေးရန်နှင့်မည်သည့်အရာကိုရှာဖွေရမည်ကိုအမှန်တကယ်သိသောသူများအတွက်ဤအပေးအယူလုပ်နည်းကိုရှာဖွေခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ (Happy Music) လူအများစုက eBay ကိုသုံးပြီးပစ္စည်းတွေကို ၀ ယ်ဖို့အသုံးပြုကြပေမဲ့၊ တကယ်ကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ပစ္စည်းအသစ်တွေကို ၀ ယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာပဲ။
ထိုအခါငါခရီးစဉ်အပြီး Self- ဖျက်ဆီးသောစျေးပေါတရုတ် rip-offs အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်အကြိုက်ဆုံးအွန်လိုင်းဆိုင်ကယ်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်သူတို့၏စာရင်းများကို eBay eBay တွင်ရောင်းချကြသည်။ ဤပစ္စည်းအများစုကိုသင်တို့၏အဓိကစာမျက်နှာတွင်တွေ့ရသည့်ဈေးနှုန်းအတိုင်းသာရောင်းချသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်အကောင်းဆုံးသောကမ်းလှမ်းမှုစာရင်းနှင့်ရွေးချယ်သော overstock အချို့ရှိသည်။
၎င်းသည်သင့်အားအနည်းငယ်နိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ညှိနှိုင်းရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်၊ သို့သော်ရည်မှန်းချက်ကြီးလွန်းခြင်းမရှိ - သင် ၅၀% ၀ န်းကျင်မရရှိသော်လည်း၎င်းသည်ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာပေါ် မူတည်၍ နှစ်အနည်းငယ်မျှသက်သာစေရန်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။ မိုင်အကွာအဝေးကွာခြားနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကြိုးစားသင့်သည်။ သေးငယ်သောစက်ဘီးစတိုးဆိုင်များစွာသည် overstock (သို့) ပွင့်လင်းသောပစ္စည်းများရောင်းရန် eBay စတိုးဆိုင်များကိုသူတို့၏စတိုးဆိုင်၏နောက်ဘက်မှမောင်းထုတ်ကြသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ တစ်ခါတလေသူတို့ကပစ္စည်းတွေကိုလေလံတင်ရင်တောင်ကောင်းတာကရောထွေးတာမဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကဒီပစ္စည်းကိုသာရှာနေမယ်ဆိုရင်တစ်ခုခုကလုံးဝမျှတတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရနိုင်တယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ဟာအခြားလူ ၅၀ နဲ့အတူလေလံဆွဲနေပြီးကံကောင်းပါစေ။ ငါသည်လည်းသင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်၏စည်းကမ်းချက်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြချင်ပါတယ်။ ရောင်းသူမှာမတူညီတဲ့စည်းကမ်းချက်များရှိပြီးပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီးမတူညီတဲ့စည်းကမ်းချက်များရှိနိုင်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ပါ။ သံသယဖြစ်ပါက ၀ ယ်လိုအားအားလုံးကိုကယ်တင်ရန် ၀ ယ်ရန်ခလုတ်ကိုမနှိပ်မီမေးခွန်းများစွာမေးပါ။ (Light ဒစ္စကိုဂီတ) ပစ္စည်းစာရင်း ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်၏စာရင်းနောက်တစ်ခုမှာအမှန်တကယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ င်ကြေးပေးသော်လည်းကျွန်ုပ်၏အမြင်တွင်ကျိန်းသေသည်။ ExpertVoice သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်သူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်နှင့်ပိုမိုထိတွေ့ရန်အတွက်အထူးလျှော့စျေးဖြင့်ရောင်းချသည်။
၎င်းသည်အွန်လိုင်းသြဇာသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ရှိသော်လည်းသင်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအခမဲ့ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ရောင်းချခြင်း၏ခံစားချက်မဲ့နေသည်။ ငါလော့ဂ်အင်ဘယ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသင်အမှန်တကယ်တွေ့မြင်နိုင်ဖို့အဓိကစာမျက်နှာကိုပြချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကစည်းကမ်းချက်များနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ဆိုင်ကယ်အ ၀ တ်အစားများ၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ စက်ဘီးအစိတ်အပိုင်းများနှင့်စက်ဘီးကိရိယာများနှင့်စက်ဘီးအစရှိသည်တို့ရှိသည်ကိုငါပြောနိုင်သည်။
ဤအရာအားလုံးနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အချို့သည် ၆၀% အထိလျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည်ဟာသမဟုတ်ပေ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီကိစ္စမှာကန့်သတ်ချက်တွေရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ဟာဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လောက်မကြာခဏ ၀ ယ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကန့်သတ်ထားတယ်။ ၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သံအမတ်များတပ်ဆင်ခြင်းလည်းဖြစ်သဖြင့်အနည်းဆုံးသူတို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်ထုတ်ကုန်များအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဤအွန်လိုင်းသင်ခန်းစာများကိုနည်းနည်းနည်းနည်းဖြင့်အဖြေရှာပြီးအဆုံးသတ်ရမည်။
သူတို့ယူရန်အလွန်လွယ်ကူသည်ဟုသင်ပြောရန်ကျွန်ုပ်သည်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။ နေ့လည်စာစားချိန်တွင်သင်၏စိတ်ကိုများပြားစေနိုင်ပြီးစိတ်မပူပါနှင့်။ သင်မည်သို့ဝင်ရောက်နိုင်မည်နည်း။ အသင်း ၀ င်မှုအတွက်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိရမည်လော။ p? တကယ်တော့မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်ဈေးချိုပြီးအချို့နည်းလမ်းများတွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ MountainBike အသင်း IMBA ၏အသင်း ၀ င်ဖြစ်လာပါကသင်သည်သင်၏အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုအနေဖြင့် ExpertVoice ကိုအမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သည်။ IMBA တွင်အသင်း ၀ င်ခြင်းသည်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၄၀ ခန့်သက်သာပြီးထိုငွေကိုတောင်ကြီးတောင်ငယ်လူထုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးသို့ပေးသည်။
၎င်းသည်လူတို့အားလမ်းကြောင်းများထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အသစ်များဖွင့်ရန်ကူညီပေးသည်။ မြေယာပိုမိုရရှိရန်အတွက်သင်၏ဒေသန္တရအစိုးရသို့ပင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ တော်တော်လေးကြီးမားတဲ့ Win-Win ခြုံငုံ, ဟုတ်သလော သင်၏အလုပ်ရှင်မှသဘောတူညီမှုတစ်ခုဖြစ်ပါကယခုသင်အခမဲ့ ၀ င်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ်များရှိသူတစ် ဦး ဦး အားပြောပါ။ အလုပ်မှတဆင့်သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာဖြင့် log in လုပ်နိုင်မလားသို့မဟုတ်သူတို့အသုံးပြုသော access id code ရှိမရှိကြည့်ပါ။
ဒါကိုစစ်ဆေးရန်နာကျင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊ သင်ရရှိသောအထူးလျှော့စျေးများအတွက်တစ်နှစ်လျှင် $ 40 ကိုအလွယ်တကူရနိုင်သည်။ (လူကြိုက်များသောတေးဂီတ) နောက်ဆုံးတော့ဘာလုပ်ရမလဲ။
ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးနေရာဖြစ်သည့်အတွက်ကော်လိုရာဒိုတွင်ရှိသည်။ Pros Pros Closet ဆိုတာဘာလဲ။ ၀ ယ်ယူနိုင်သောစက်ဘီးများနှင့်စက်ဘီးအပိုပစ္စည်းများအသစ်ကို ၀ ယ်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဒီနေရာမှာ Maxis High Roller II တာယာအသစ် ၁၄ ခုစီအတွက်တာယာအသစ်ကိုကျွန်တော်တကယ်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။
ပြီးတော့ဒါက SunRace 11-50 သွား 50 ကက်ဆက်ကိုဒေါ်လာ ၄၈ နဲ့ဝယ်ပြီးလက်လီဈေးထက် ၀ က်လောက်တွေ့တယ်။ အခုသူတို့တပ်ဆင်ထားတာကြောင့်အလှကုန်ပစ္စည်း ၀ တ်မှုန်ဝါးလာတယ်။ သွားများသူတို့ကိုယ်သူတို့ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်နိုင်မှုကြောင့်၎င်းသည်အရောင်းပြခန်းပြသရုံဖြစ်သည်။ အရမ်းကောင်းတယ်၊
အကယ်၍ သင်သည်သူတို့၏စာရင်းများအားလုံးမှမည်သည့်နေရာမှရရှိသည်ကိုသင်စဉ်းစားနေပါက၎င်းသည်အမှန်တကယ်ရောနှောမှုအနည်းငယ်သာဖြစ်သော်လည်းသူတို့၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုသောစက်ဘီးများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုစတိုးဆိုင်များသို့ယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစက်ဆုပ်ဖွယ်ရာကိုမရှာပါနှင့်၊ အကြောင်းမှာသင်အသုံးပြုသောစက်ဘီးဝယ်ရန်စိတ်ကူးရှိသောကြောင့်မကြိုက်ပါ။ လုံးဝတရားမျှတပါတယ်
ငါပြောရမယ်, သို့သော်, Pros Closet စူပါအထင်ကြီးဖြစ်ပြီးသူတို့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ခေါ်ဆို။ ဒီလူတွေက ၀ င်လာတဲ့အရာအားလုံးကိုစစ်ဆေးတယ်။ စက်ဘီးကိုမခိုးရဘူးဆိုတာသေချာတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့တွင်အမှန်တကယ်အရာအားလုံးကိုဓာတ်ပုံရိုက်နေသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံဆရာများရှိသည်။
၎င်းသည်သင်ဝယ်ယူသောပစ္စည်းများကိုမည်သည့်ပစ္စည်းများဝယ်ယူကြောင်းအတိအကျသိမြင်စေသည်။ သင်ဟာ keyboard ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ကျပန်း Yahoo ပဲမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီလူတွေဟာစက်ဘီးဂီယာကိုရှင်သန်စွာအသက်ရှူနေကြတာပါ။ ဒါကြောင့်သင်တကယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ရပါတယ်။ တကယ်တော့သူတို့ကပစ္စည်းတစ်ခုစီတိုင်းကိုပင်အလေးချိန်ရှိတဲ့အတွက်ဘီးတပ်ထားတဲ့ဂရမ်ဟာဘယ်လောက်ကျတယ်ဆိုတာကိုသင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့်စက်ဘီးစတိုးဆိုင်များနှင့်အလွန်အကျွံအလွန်များသောအခြားကုန်သည်များကဲ့သို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့သွားခြင်းဖြင့်သူတို့၏စာရင်းအမြောက်အများကိုရရှိသည်။ ရုံဝယ်ပါ။ ဒါကသူတို့ကို Maxis တာယာတွေကိုလှမ်းယူပြီးတစ်တန်ဒေါ်လာ ၁၄ ဒေါ်လာနဲ့ရောင်းနိုင်အောင်လုပ်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်အသစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးဒါမှမဟုတ်စျေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ရနိုင်ပါတယ်။
ငါသူတို့မှာရက်ပေါင်း ၃၀ ပြန်လာရေးမူဝါဒရှိတယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြချင်တယ်။ ဒါကြောင့်မင်းဟာမင်းထင်ထားတာတွေနဲ့မတူတဲ့အရာတစ်ခုရရင်၊ အဲဒါတွေကိုလုံးလုံးလျားလျားမကျရောက်စေဘဲ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးဖော်ပြရမယ့်အချက်တစ်ချက်။ သင့်မှာနည်းနည်းစျေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုရှိရင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပါမယ်၊ ဒါပေမယ့်သင့်မှာစက်ဘီးအဟောင်းတစ်လုံးရှိတယ်၊ သင်အဲဒီကုန်ကျစရိတ်အတွက်ကူညီပေးနိုင်တဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယ်ရှားပစ်ရမယ်။ နောက်ဆုံးသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ထားသောဗီရိုအားသင်နှင့်သင်တစ်ခုခုလုပ်လိမ့်မည်ဟုကျိန်ဆိုသောအားဖြင့်သင်၏သိသာထင်ရှားသောအခြားအရာများကို ပို၍ ပျော်ရွှင်စေသည်။ ဒီတော့အဲဒီမှာမင်းမှာရှိတယ်။
ငါ့ကိုအောက်ကမှတ်ချက်များအတွက်သိပါစေ? မင်းဒီဆောင်းပါးကိုစဉ်းစားနေပြီ၊ ဆောင်းပါးကိုသင်ကြိုက်ပါက၎င်းကိုလက်မထောင်ပါနှင့်ယခုဆောင်းရာသီတွင်သူတို့၏စက်ဘီးကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေသည့်မိတ်ဆွေတစ် ဦး နှင့်ဝေမျှနိုင်သည်။ သင်အသစ်ရောက်ရှိနေလျှင် ကြိုဆိုပါတယ်, ထိုရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ကြသည်။
ငါဒီမှာနှိပ်ပါ။ Subscribe ခလုတ်ကိုဒီမှာနေရာတစ်နေရာဖြစ်သင့်ပြီးနောက်ဘေးကခေါင်းလောင်းသတိပေးခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ သို့သော်ထိုအချိန်အထိလူတိုင်းမည်သည့်စက်ဘီးကိုမဆိုသင်ဖမ်းယူပြီးနောက်သင်၏စွန့်စားမှုကိုရှာဖွေရန်အသုံးပြုပါ။ အမြန်နေကောင်းပါစေ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဓိကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာစက်ဘီးစီးသူတို့၏ခြေထောက်ရိတ်လုပ်ရမယ်သူတို့ရဲ့မကြာခဏ Post- စီးနင်းနှိပ်နယ်ပိုပြီးအဆင်ပြေ။ နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်ရိတ်သည်လမ်းပေါ်မှာဆံပင်မရှိဘဲပြိုလဲပြီးနောက်လမ်းအဖုများသို့မဟုတ်အခြားဒဏ်ရာများကိုကုသသည်။ ပတ်ပတ်လည်အရေပြားကိုတိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။10ပြီ 10, 2019
ဒါကြောင့်သင်စက်ဘီးစီးတာကိုလုပ်ခဲ့တုန်းကတစ်ခုခုပျောက်နေတယ်ဆိုတာသတိပြုမိခဲ့တယ်။ လူတိုင်းကသူတို့ခြေထောက်မှာဆံပင်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ ဆိုလိုတာကမင်းခြေထောက်တွေမရိတ်ရရင်မင်းခြေထောက်တွေအားလုံးရိတ်လိုက်တာကမင်းခြေထောက်တွေရိတ်ရမယ်။ စက်ဘီးစီးခြင်းဖြင့်အစကောင်းဆုံးလော ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရအောင်၊ ပြီးတော့စက်ဘီးသမားမဟုတ်သူတွေရဲ့ခြေထောက်တွေကိုဘာကြောင့်ရိတ်နေတာလဲဆိုတာကိုသင့်ကိုဆင်ခြေပေးဖို့တောင်မှဗီဒီယိုတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်လူအများကိုအဘယ်သို့ပြုသင့်သည်ဟူသောအချက်များကိုရှာဖွေခြင်းလမ်းညွှန်မှုကိုရှာဖွေသည့်အခါများသောအားဖြင့်အချို့သောအခြေအနေများတွင်ခြေထောက်များရိတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအကောင်းအဆိုးများသည်အနည်းငယ်ကွဲပြားနေပုံရပါသည်၊ ခြေထောက်တွေရှိပေမယ့်တစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာတော့ခင်ဗျားသိတဲ့အချည်းနှီးကိစ္စပဲ။ ခင်ဗျားသိတဲ့ကြွက်သားတွေကိုကြည့်ရတာပိုကြည့်ကောင်းလာစေတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ပိုပြီးကြည့်ကောင်းတယ်၊ အနှိပ်ခံရတာပိုနှစ်သက်တယ် အနှိပ်နှင့်သင်တန်း၏ပိုပြီးတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးနှင့်သင်လေယာဉ်ပျက်ကျခြင်းနှင့်သင်ဂျူရီလူကြီးများရှိပါကရောဂါကူးစက်မှုကိုမရရန်ပိုကောင်းသည်ကောင်းပြီ, ပညာရှင်များဒီကိစ္စကိုအပေါ်နည်းနည်းကွဲပြား, ပုံရသည်, မကျင့်ပေမယ့်တချို့အလေးအနက်အကြံပေးချက်ရှိပါတယ် မင်းခြေထောက်တွေလှဲချသင့်တဲ့အကြောင်းရင်းနှင်းဆီတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုဟာမင်းရဲ့မောင်းနှင်မှုပုံစံ NT ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်မကြာခဏအပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာအများသောအားဖြင့်ထိမိလဲမှုဖြစ်စေတဲ့ယာဉ်မောင်းတစ် ဦး ဆိုရင်နှင်းတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုဟာခြေထောက်ရိတ်ခြင်းအငြင်းပွားမှုမှာကြီးမားတဲ့ပြissueနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ကားတဲ့အခါမှာဖွယ်ရှိ။ ခြေထောက်များသည်အသုံးဝင်နိုင်သည်။ ဆံပင်ရှည်သည်အထူးသဖြင့်ဒူးခေါင်း၏ဒူးခေါင်းတွင်အနာဖေးစတင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်ဆံပင်ပုံသဏ္startsာန်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုကုသရန်လုံးဝငရဲဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ခြေထောက်ရွှေ့သောအခါနှင့်အလွန်နာကျင်စေသည်။ ထိုအနာဖေးကိုကောင်းစွာအနာပျောက်စေသောအရာဖြစ်စေပါ။ ချောချောမွေ့မွေ့ရှိသောအရေပြားရှိပါကချောမွေ့သောအသားအရေကိုဂရုစိုက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်၊ အကယ်၍ သင့်တွင်ချောချောမွေ့မွေ့ရှိသောအရေပြားရှိလျှင်၊ သင်၏ဆံပင်ကိုအနာဖေးများနှင့်ဖြတ်သွားသည့်နေရာများနှင့်အတူရောစပ်ခြင်းနှင့်ထွေးခြင်းတို့ဖြင့်ရောနှောနေခြင်းကြောင့်လေယာဉ်ပျက်ကျပြီးနောက်အမြန်ဆုံးနာကျင်စွာမောင်းနှင်နိုင်လျှင်ပြန်သွားလျှင်ခြေထောက်များကိုရိတ်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိခန္ဓာကိုယ်တွင်းတုန့်ပြန်မှုသည်ခြေထောက်များလှုပ်ခြင်းသည်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ယခုအခါရိတ်ခြင်းနှင့်ရိတ်ခြင်းမရှိသောခြေထောက်များကြားတွင်ကျော်ကြားလာပြီဖြစ်သောထောင့်မှကြည့်လျှင်သိပ္ပံပညာကိုလေ့လာခြင်းသည်ယခုအခါလေထုခုခံမှုနှုန်းသည် ၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်လျော့ကျသွားသည်။ ယင်းသည်ယုံကြည်အားထားရသည့်အမြန်နှုန်းနှင့် ၁၅ ဝပ်မျှလျော့နည်းသည်။ သက်သေသာဓက, ဒါပေမယ့်ဒီ wa ဒီရလဒ်က ၁၀၀ ရာနှုန်းခိုင်လုံတဲ့၊ ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဖို့အတွက်တစ်ခုတည်းသောစမ်းသပ်မှုဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကရိတ်လိုက်တဲ့ခြေထောက်တွေဟာလေဒီယိုဒိုင်းနမစ်ပိုများလာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမျက်နှာသာပေးပြီးတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောတတ်တယ်။ စကားပြောသူ Oliverbridgewood နှင့်သူသည်ခြေထောက်ပေါ်ရှိဆံပင်သည်ကိုယ်ခန္ဓာရှိချောက်ကမ်းပါးများကဲ့သို့ပြုမူနိုင်သည်၊ laminar စီးဆင်းမှုကိုကမောက်ကမဖြစ်စေသောစီးဆင်းမှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေပြီးလေထု၏အလေးချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးဘာသာစကားကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်အချက်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဂေါက်သီးဘောလုံး r အပေါ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကြည့်ပါကဖန်စီအရေပြားဝတ်စုံနှင့်ဆင်တူသည်။ ထို့ကြောင့်လက်ဝတ်ရတနာများမပျောက်သေးဘဲခြေထောက်များကိုမုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်း၊ လေရွတ်ပြခြင်းအားဖြင့်လေဒီယိုဒိုင်းနမစ်၏တိုးတက်မှုရှိမရှိကိုငါထင်သည်။ သင်၏ခြေထောက်များကိုရိတ်ခြင်းအဘယ်ကြောင့်အနှိပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ခြေထောက်များကိုလှီးဖြတ်ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးဆင်ခြေဖြစ်ပြီးစက်ဘီးစီးသူမဟုတ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့လုံးဥပမာလက်ဖြင့်နာရီကိုလက်ဖြင့်ပွတ်သပ်နေခြင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကြမ်းတမ်းသောမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့တက်ခြင်းနှင့်အောက်သို့ဆင်းခြင်း။ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းနှင့်အနှိပ်ခံပြီးနောက်၌ပင်တစ်နေ့တာကုန်ပြီးသောအခါလက်တို့ကိုအနာများထိခြင်းသို့အလွယ်တကူရောက်သွားနိုင်သည်။
တကယ့်ကိုနက်ရှိုင်းတဲ့အနှိပ်ခံလိုက်တာကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ မင်းမှာအမွေးထူခြေထောက်တွေရှိပြီးမင်းရဲ့ဆံပင်တွေကတစ်နာရီလောက်ပဲခက်ပေမဲ့အတော်လေးနာကျင်စေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ပုံမှန်အနှိပ်ကိုခံယူမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ခြေထောက်တွေကိုရိတ်ဖို့စဉ်းစားမိလိမ့်မယ်။ မ။ cera masseuse ကိုအနည်းငယ် biteasier ဖြစ်စေရန်ယခုငါတို့ de Tour သည်ပြင်သစ်မှခြေထောက်ရိတ်ခြင်းအတွက်ဆင်ခြေ၏နောက်ဆုံးအမှတ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရှည်လျားသောကျွန်ုပ်ထင်သောအတိုက်အခံသမားများ၏ရိတ်သောခြေထောက်များကိုစွဲလမ်းထားပြီးငါအနည်းငယ်တူးခဲ့ရာကိုသင်သိသောကြောင့် ငါလူကြီးတွေဘာလို့ခြေထောက်မရိတ်တာတောင်မှဘာကြောင့်အစပြုတာလဲဆိုတာကိုသိချင်ခဲ့တယ်။ ဘစ်ဘန်းကြီး (သို့) မည်သည့်ဘဝကမှစတာမို့ငါတို့ခြေထောက်တွေမရိတ်လိုက်ဘူးလို့ဆိုလိုတာကဒုတိယကမ္ဘာမှာခြေထောက်တွေကိုစပိတ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ရိတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်စစ်ရိတ်ပြီးခြေထောက်တွေနောက်ကျောမှာအရည်အိတ်ကပ်တွေဒါမှမဟုတ်မိတ်ကပ်တွေထည့်လိုက်တယ်။ တကယ်တော့ဂျီတွေဟာတကယ်တော့ခြေအိတ်တွေလို့ထင်တယ်။ ငါတို့ခြေထောက်တွေရိတ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒီအကြောင်းပြချက်တွေကိုသင်တွေ့ပြီဆိုရင်၊ ငါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှားကြောင်းသက်သေပြချင်တယ်၊ ကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ကမှတ်ချက်များအပိုင်းမှာရေးပါ၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ သိသင့်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကမင်းတို့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုရိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ဟာနေလောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါကြောင့်သင့်ခြေထောက်တွေရိတ်ပြီးနောက်မှာဒီခြေချောင်းကိုဖမ်းမိပြီးတဲ့နောက်သင်ပထမ ဦး ဆုံးစီးနင်းမှာနေရောင်ကာကွယ်ဆေးကိုထည့်ထားပါ။ မင်းခြေထောက်မရိတ်ချင်ဘူး၊ အမွေးထူတဲ့ခြေထောက်တွေကိုစီးချင်တယ်။ ပြီးတော့စက်ဘီးစီးဖို့မလိုချင်ဘူး၊ ငါစက်ဘီးစီးဖို့မလိုပါဘူး။ ငါပြောချင်တာက၊ လူတွေကမင်းကိုမင်းခြေထောက်မရိတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာမင်းကိုလာတိုင်ကြားတယ်လာငါ့ကိုလာတွေ့လိမ့်မယ်ငါရှာတွေ့တော့သူတို့လိုချင်တာကိုပြောပါလိမ့်မယ်မင်းကသူတို့တာယာတွေကိုလျှော့ချမယ်။ ဒါငါလုပ်ပေးမှာပါ။ အဓိကသော့ချက်ကတော့သင့်ရဲ့စက်ဝန်းကိုပျော်ရွှင်စွာခံစားနိုင်ဖို့ပဲလို့ထင်တယ်။ မင်းရဲ့ရက်တွေကိုမဖြုန်းတီးသင့်ပါဘူး။ ဆံပင်အရောင်ဆိုးနေစရာမလိုတော့ဘူးနင့်ရောင်စုံဆံပင်ခြေထောက်ပန်းရောင်ကမင်းစက်ဘီးစီးတာကိုနှစ်သက်သလိုလုပ်ပါ။ ပြီးတော့အမွေးထူသောခြေထောက်များကိုပိုကြိုက်ပါကသင်၏စက်ဘီးပေါ်ရှိသော့ချက်စာများကိုထုတ်ယူရန်မျှတစွာကစားပါ။ ငါတို့မလိုချင်ဘူးဆိုရင်ခြေထောက်တွေကိုငါနင့်ကိုချစ်တယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းရဲ့အတွေးတွေအားလုံးကိုမင်းကြားဖူးမှာပါ။ ဒါကြောင့်အောက်ဖော်ပြပါထင်မြင်ချက်များကိုကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။
ယနေ့ငါ၌ရယ်စရာကောင်းသောသူအချို့ရှိလိမ့်မည်ထင်သည်။ မင်းအားလုံးကိုမကြာမီတွေ့မြင်တော့မည်ကိုမြင်ရသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏မျက် ၀ န်းကိုချက်ချင်းရိတ်သိမ်းတော့မည်
တစ်နေ့လျှင်စက်ဘီးစီးခြင်းသည်မိနစ် ၃၀ လောက်လုံလောက်ပါသလား။
အပေါ်လေ့ကျင့်ဆိုင်ကယ်အနည်းဆုံးအဘို့မိနစ် ၃၀ရန်နေ့သင်၏နှလုံးသွေးကြောနှင့်ကြွက်သားခံနိုင်ရည်ကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်။ တသမတ်တည်းကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏အေရိုးဗစ်စွမ်းရည်တိုးတက်လာသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်ဆိုင်ကယ်ကြာကြာသို့မဟုတ်ပိုပြီးပြင်းထန်သောစီးအပေါ်။
လက္ကားနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူလိုက်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုတောင်မှခြစ်ရာမှစပြီးအစိတ်အပိုင်းအသစ်များအားလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စတိုးဆိုင်တွင် ၀ ယ်ထားသောစက်ဘီးအသစ်၏ကုန်ကျစရိတ်ထက်ပိုများသည်။ 'ခြစ်ရာကနေတည်ဆောက်' စက်ဘီးတစ်စီး၏ကုန်ကျစရိတ် $ 1000 မှာစတင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်“ အသစ်သောစက်ဘီးအစိတ်အပိုင်းများ” တွင်ဒေါ်လာ ၅၀၀ နှင့်“ အသုံးပြုသောစက်ဘီးဘောင်” ကိုအသုံးပြုသည်။
အခြေခံအကျဆုံးဆိုင်ကယ်, အရည်အသွေးမြင့်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ဝေးသို့မဟုတ်မကြာခဏစီးရန်မရည်ရွယ်ပါဆိုင်ကယ်တစ်နှစ်လျှင်မိုင်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်Walmart ဆိုင်ကယ်ရုံဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကတစ် ဦး အကြားခြားနားချက်ကိုမသိရပါဘူးစက်ဘီးကောင်းတယ်နှင့်စျေးပေါဆိုင်ကယ်။2021 မေလ 30,
၏ကုန်ကျစရိတ်အတွက်အကြီးမားဆုံးအချက်များတစ်ခုမှာစက်ဘီးပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်အဆင့်အတန်းရှိသည်။ ကာဗွန်၏အရည်အသွေးမြင့်မားလေထုတ်လုပ်သူများထံမှအရင်းအမြစ်များပိုမိုကုန်ကျလေလေဖြစ်သည်။ အကယ်ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်သူလည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကာဗွန်ထုတ်လုပ်နေသည်, ဒီကုန်ကျစရိတ်တစ် ဦး ၏ရောင်းစျေးနှုန်းအတွက်ကုန်ကျရပါမည်ဆိုင်ကယ်။
ခြေထောက်ရိတ်ခြင်းinစက်ဘီးစီးခြင်းဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာပတ်ပတ်လည်ခဲ့ရိုးရာဓလေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလဲမင်းအမှန်တကယ်ပင်အမှန်တကယ်အကြောင်းပြချက်နှင့်ကြုံတွေ့ရတတ်သည့်စက်ဘီးစီးသူများဖြစ်သည်လုပ်တယ်အကြောင်းကတော့ရိတ်ခြေလုပ်နိုင်လုပ်ပါခံစားမှုမြန်မြန်အပေါ်ဆိုင်ကယ်အထူးသဖြင့်မင်းကတက်လိုက်ပါတယ်မင်းရဲ့aero ပြိုင်ပွဲကိရိယာအစုံ။
လေပြေ။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာစက်ဘီးစီးခြင်းဘောင်းဘီတိုတွေအရမ်းများတယ်တင်းကျပ်စွာလေခွင်းဗေဒအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပိုနီးကပ်လေလေလေခံနိုင်ရည်နည်းလေလေဖြစ်မည်၊ ထို့ကြောင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာနှင့်အားစိုက်ထုတ်မှုနည်းပါးစေသည်။ဒီဇင်ဘာလ 3, 2020